﻿Download I-Microsoft® Office Language Accessory Pack – IsiXhosa from Official Microsoft Download Center
I-Microsoft® Office Language Accessory Pack – IsiXhosa
HausaI-DariIgboIkinyarwandaIsi-AfrikansiIsi-AlbhaniyaIsi-AmharikhiIsi-ArmeniyaIsi-AssameseIsiAyisilendaIsi-Azeri (Latini)IsiBaskhaIsiBengali (Indiya)IsiBhelarusiyaIsiBhengali (Bangladesh)IsiBhosniya (Latini)IsiFarsiIsiFilipinoIsiGalishiyaIsiGujaratiIsiJojiyaIsiKannadaIsiKhatalaniIsiKhmerIsiKonkani IsiKyrgyzIsiMalayalamIsiMaltaIsiMāoriIsiMarathiIsiMasedoniya (saseFYROM)IsiNorwejiyeni (isiNynorsk) saseNorwayIsi-OriyaIsiPashtoIsiPediIsiPunjabiIsiQuechua (sasePeru)IsiRomanshIsiSebhiya (isiSirilikhi)IsiSinhalaIsiTatarIsiTeluguIsiThamiliIsi-Uzbek (iLatini)IsiWelshiIsiWolofIsiXhosaIsiYorubaIsiZuluKiswahiliLëtzebuergeschNepaliScottish Gaelic - United KingdomSerbian (Cyrillic) - Bosnia and HerzegovinaSetswana (Aforika Borwa)Sindhi - Islamic Republic of PakistanTurkmen (Latin) - TurkmenistanumAyirishiUrdu - PakistanUyghur - China
I-Microsoft Office Language Accessory Pack - IsiXhosa songeza umboniso owongezelelekileyo, uncedo, okanye izixhobo zokufunda kwakhona ngokuxhomekeke kulwimi olufakelayo.
I-Microsoft Office Language Accessory Pack - IsiXhosa yongeza umboniso owongezelelekileyo, uncedo, okanye izixhobo zokufunda kwakhona ngokuxhomekeke kulwimi olufakelayo.
Emva kofakelo, i-Microsoft Office Language Accessory Pack - IsiXhosa ukuba nako nokhetho oluhambelanayo luyafumaneka kusetyenziso lwe-Office nakusetyenziso lwe-Microsoft Office Language Preferences.
Ngengcombolo yakutshanje ngeemfuneko zeSistim bona ilinkiIimfuneko zeSistim ze-Office
I-Microsoft Windows 8 - 32 okanye i-64 bit OS
I-Microsoft Windows 10 - 32 okanye i-64 bit OS. (Yabasebenzisi For Office 2019 one-time purchase users Windows 10 is the only supported OS)
Inqaku:Nceda uqinisekise ufakela iiPhekhi zeSevisi zakutshanje zeNdlela Yokusebenza yakho ukuqinisekisa inkxaso ebonwayo yolwimi lwakho.
IsoftweNaluphi na uhlelo lwe-Office 2016 (okanye lwakutshanje) suite okanye oluzimeleyo oluqulethe i-Microsoft Excel, i-Microsoft Lync, i-Microsoft OneNote, i-Microsoft Outlook, i-Microsoft PowerPoint okoanye i-Microsoft Word luza kuxhasa i-Microsoft Office Language Accessory Pack 2016 (okanye lwakutshanje) - IsiXhosa.
Ikhompyutha neProsesaIprosesa ye-1.6 GHz kunye nenkxaso ye-SSE2 okanye engaphezulu; i-4GB RAM; i-2 GB RAM (i-32-bit) okanye engaphezulu
Isithuba sediskiUkongezelela kwisithuba sediski eyomeleleyo esetyenzisiweyo lusetyenziso olufakelweyo lwe-Office,
i-4 GB yesithuba sediksi eyomeleleyo esifumanekayo.
Zonke ezinye iimfuneko zesistim ziyafana nezo zosetyenziso lwe-Office olusebenzisayo ne-Microsoft Office Language Accessory Pack - IsiXhosa.
I-Windows Language Interface Pack Kucetyiswa ukuba ufakele i-Windows Language Interface Packs yakutshanje ukuze ufumane inkxaso yelwimi ebonakalayo yeNdlela Yokusebenza yakho nosetyenziso lwesoftwe.
Ubungakanani beMonitha neesetingi ze-DPIIifonti ezininzi ziye zayilwa ukuze zifunde ngokubonakalayo kubungakanani be-1366 x 768. Ukuba ngaba unengxaki nokufunda ifonti yakho yolwimi nceda uhlaziye iisetingi zakho zomboniso ukuya kobu bungakanani okanye obungaphezulu ukuba kuyimfuneko. Nceda uqaphele: sicebisa ukuba usebenzise usetyenziso lwe-Office kwisetingi ye-DPI esisiseko ye-Windows - i-96 DPI. Ukusebenzisa isetingi ye-120 DPI kusenokubangela amava omsebenzisi e-Office kolunye usetyenziso lwe-Office ngokwandisa ubukhulu bedayalog ye-Office.
Ukhetho Lwengingqi noloLwimi Ukongezelela kucetyiswa ukuba lonke Ukhetho Lwengingqi noloLwimi kwiPhaneli yoLawulozisetwe kulwimi lwe-Microsoft Office Language Accessory Pack - IsiXhosa.
Ukuze ufakele le Phekhi yeSibonelelo soLwimi:
KhuphelaiPhekhi yeSibonelelo soLwimi Fakela ifayile ngokucofa le linki Khuphela isiFakeli sePhekhi yeSibonelelo soLwimi
Xa Ugqibile Ukukhuphela Khetha uSebenzisa.
Landela imiyalelo ekwiskrini ukugqibezela ufakelo.
Tshintsha i-intafeyisi yomsebenzisi ukuya kulwimi lwePhekhi yeSibonelelo soLwimi
Emva kokuba iPhekhi yeSibonelelo soLwimi ifakelwe, ungatshintsha ulwimi lweintafeyisi yomsebenzisi ukuya (isiXhosa) ukusuka ngaphakathi kusetyenziso lwe-Office okanye ukusuka kusetyenziso Lokhetho loLwimi lwe-Microsofr Office.
Ukutshintsha ulwimi lweintafeyisi yomsebenzisi ukusuka kuKhetho loLwimi:
QalisaUkhetho loLwimi lwe-Office.
Ukusukakuluhlu oluthi Khetha iiLwimi Zokuhlela, khetha ulwimi lwakho lokuhlela uze ucofe iqhosha elithiSeta njengeSiseko.
Ukusukakuluhlu oluthi Khetha uMboniso neeLwimi zoNcedo, khethauLwimi loMboniso uze ucofeiqhosha elithi Seta njengeSiseko.
Cofa iqhosha elithi Kulungile.
Ukuze utshintshe ulwimi lweintafeyisi yomsebenzisi ukusuka ngaphakathi kusetyenziso lwe-Office:
YiyakwiFayile, Ukhetho, emva koko ucofeuLwimi.
Ukusukakuluhlu oluthi Khetha iiLwimi Zokuhlela, khetha ulwimi lwakho lokuhlela uze ucofe iqhosha elithiiqhosha elithi Seta Kulungile.
Ukusukakuluhlu oluthi Khetha uMboniso neeLwimi zoNcedo, khethauLwimi loMboniso uze ucofeiqhosha elithi Seta Kulungile.
Iisetingi zolwimi ozikhethileyo ziza kusebenza kwixesha elizayo uqalisa usetyenziso lwakho lwe-Office.
Tshintsha ulwimi lopelo
I-Microsoft Office Language Accessory Pack - (IsiXhosa) isenokuquka izixhobo zokufunda kwakhona ngolwimi lwakho. Nantsi indlela yokutshintsha ulwimi lopelo kumbhalo okhethiweyo:
I-Excel: I-Excel isebenzisa isetingi yolwimi yokuhlela ye-Microsoft Office Primary ukuqonda ulwimi lopelo olusisiseko. Ukuze utshintshe oku, cofaiFayile uze ucofeUkhetho. Cofa ukhetho Lokufunda kwakhona uze ukhethe enye yeelwimi ezifumanekayo kuluhlulolwimi Lwesichazi-magama.
I-Outlook, i-PowerPoint, i-Word ne-OneNote: Khetha umbhalo onqwenela ukuhlola upelo lwawo, ucofe Hlola, cofa iqhosha elithi uLwimi, uze ucofeukhetho oluthi Seta uLwimi Lokufunda kwakhona. Khetha ulwimi olufunayo kwibhokisi yoluhlu uze ucofeuKulungile.
Office 2010 Customer Success Stories Around the World - IsiXhosa